अभिभावकले यति सामान्य कुरा याद नगर्दा बच्चाको जीवनभर अभिसाप बन्छ - उज्यालो पाटो
अभिभावक हुनु सामान्य कुरा होइन । अभिभावकले गर्ने सामान्य कुराहरुको पनि बालबालिकका लागि त्यो महत्वपुर्ण शिक्षा बन्छ । यो कुरा धेरै अभिभावकलाई थाहा त हुन्छ तर त्यसको प्रयोगका बारेमा भने धेरैलाई थाहा नभएको हुन सक्छ । यो जानकारीको अभावको केहि पूर्ति पुरा होस् भनेर यहाँ हामीले सन्जीवन प्रधानको लेख प्रस्तुत गरेका छौँ । आशा छ, तपाईहरुलाई उपयोगी हुनेछ ।
अहिले हामी स्मार्टफोनको जमानामा छौ । प्राय सबैजना स्मार्टफोन बोक्छौ । यो आवश्यकता पनि हो, प्रयोग नगरि पनि जीवन नचल्ने भइसक्यो ।
प्रबिधीका अरु कुराहरुमा मोबाइलको प्रयोग आवश्यक छ तर हामीले मोबाइललाई फरक फरक किसिमले प्रयोग गर्न थालेका छौँ जसलाई सकभर प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तै : अहिले अभिभावकहरु यसको प्रयोग बच्चाहरु रिसाएको बेला शान्त पार्ने एउटा अचुक अस्त्रको रूपमा गर्छन् । बच्चाहरु रुने बित्तिकै अभिभावकहरु भन्छन्,”ला बाबु, मोबाईल हेर् ।”
फलस्वरुप, बच्चा रुन छोड्छ । हाम्रो तत्कालिन आवश्यकता पुरा हुन्छ । हामी खुशी हुन्छौ । बच्चा रिसाउदा,अटेरी गर्दा,’अब यसलाई मोबाईल चाहियो होला भन्छौँ ।’ अनी मोबाइल तेर्साइ दिन्छौँ । हामीले मोबाइल दिदै गर्दा, बिस्तारै बच्चालाई मोबाईलको नराम्रो लत लाग्न थाल्छ । त्यो कुराबाट अन्जान हामी ‘मेरो बच्चाले त आफै लक खोल्न सक्छ । यूटुयुब हेर्छ’ भन्दै अचम्मित हुन्छौँ । फुर्ति पनि लगाउछौँ ।
बिस्तारै दिनहु केही समय बच्चाले मोबाईलसँग बिताउँन थाल्छ । मोबाईल नपाएको खन्डमा, उसले अनेक बहाना बनाउँछ । प्राय: सबै अभिभावकहरुले बच्चालाई मोबाईल दिइरहने हुनाले यो कुरा अभिभावकहरुलाई सामान्य लाग्छ तर त्यो सामान्य जस्तो देखिने कुराले कालान्तरमा बच्चाहरुलाई मानसिकरूपमा ठुलो आघात पुर्याइदिन्छ । यस प्रकारको बानीले गर्दा बच्चाहरुमा पर्ने मानसिक असरहरुको बारेमा डा. सेफाली साबरीले आफ्नो पुस्तक “दी कन्सस प्यारेन्ट” मा धेरै कुरा लेख्नु भएको छ ।
तिनै कुराको केही सार यहाँ पस्कदै छु ।
डा. सेफाली भन्नुहुन्छ –
अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानहरुलाई जहिले पनि समस्याबाट तुरुन्तै उकासी हाल्ने कार्य गर्नु हुन्न । त्यसो गरेको खन्डमा, यो सबै भन्दा घातक कार्य बनिदिन सक्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा बरु, समस्याहरुलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्‍टिकोणको बिकास गर्ने बिधी सिकाइदिनु पर्छ । समस्याहरुको समाधान, आत्मनियन्त्रण तथा आत्मपरिक्षणबाट सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा सानै उमेरमा बुझाई दिनु पर्छ ।
आफ्ना भावनाहरुलाई बुझ्ने, तिनको चलखेलहरुलाई कसरी पहिचान गर्ने र त्यसलाई कसरी शान्त पार्ने भन्ने कुरोको बारेमा जानकारी दिनु पर्छ । रिस, झर्को, खुसी, प्रेम यि सबै मानबिय भावनाहरु हुन् । हामी भित्र यि भावनाहरुको चलखेल, उतार चढावहरु सधै भईरहन्छ । बच्चाहरुले पनि यस्तै कुरा बारम्बार महसुस गर्छन् ।
जब बच्चाहरु रिसाउछन्, तिनिहरुलाई केही समय (आफ्नो निगरानीमा राखेर, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरिकन) रिसाउन दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा बच्चाहरुले आफुभित्र रहेको रिसको बारेमा बिस्तारै बुझ्ने मौका पाउँछन् । मैले यसलाई आँफै सम्बोधन गर्नुपर्छ र यसको समाधान आँफै खोज्नुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि बिकास हुन्छ । हामीले बच्चा रिसाउने बित्तिकै मोबाईल फोन थमाइदिदा, उसले आफ्ना भावनालाई बुझ्ने मौका नै पाउदैन । फलस्वरूप, उसले आफ्ना आवेगहरु शान्त पार्ने माध्यम आँफै भित्र नभएर बाहिर रहेछ भनि बुझ्न थाल्छ । आफ्नो सन्तान निरास भएको बेला हामी उसलाई हत्त न पत्त अङ्गालो हाल्न कुदिहाल्छौँ ।
‘के भयो तिमीलाई ? तिमीलाई के चहियो ?’ भन्छौ । उसलाई मनपर्ने कुरो किन्न बजारतिर दौडी हाल्छौँ । यो कार्यले फेरि उसको मस्तिस्कमा अर्को कुरा भरिदिन्छ । ‘म निरास भएको बेला मलाई फकाउन कोहि न कोही आउने रहेछ’ भनेर सोच्न थाल्छ । यसले उसमा परनिर्भरताको जग बसाली दिन्छ ।
‘मैले मेरो निराशाको कारण आँफै भित्र खोज्न सक्नुपर्छ । मैले आत्मनियन्त्रण गर्दै आँफैमा खुशी हुन सक्नु पर्छ’ भन्ने भावनाले अङ्कुरितसम्म हुने मौका पाउदैन । यो कार्यले फेरि उसको मस्तिस्कमा अर्को कुरा भरिदिन्छ । उसले आफ्ना समस्याहरुको समाधान बह्य भौतिक साधनमा, परनिर्भरतामा खोज्न थाल्छ । बिस्तारै यो कुराले उसको अवचेतन मनमा जरो गाडीदिन्छ ।
जब उसले आफ्नो समस्याको समाधान बाह्य भौतिक संसारमा, सम्बन्धहरुमा पाउदैन, उ एकदिन भावनात्मक रूपमा क्षतबिक्षत बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । जब त्यो पिडा असह्य हुन्छ, अन्तत उसले आत्महत्यासम्म पनि रोज्न सक्छ ।
कोही अभिभावक पनि यस्तो पक्कै नै चाहदैनन् तर नजानेर नै आफ्ना सन्तानलाई अल्पकालिन खुसीको लोभमा जीवन भरको अभिसाप दिने काम गर्छन् । कृपया आफ्नो सन्तानलाई यस्तो अभिसाप दिने काम नगरौँ ।
आफ्ना सन्तानलाई माया गरौँ । तिनिहरुको आवश्यकता पुरा गरिदिउ तर आफ्ना सन्तानलाई माया दिदै गर्दा, तिनिहरुको आवश्यकता पुरा गरिदिदै गर्दा, आँफैले आँफैलाई केही प्रश्नहरु भने अवस्य गरौँ । मैले मेरो सन्तानहरु भित्र अन्तरनिहित आत्मनियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता, आत्मपरिक्षण गर्न सक्ने क्षमता, अनावश्यक भौतिक सामाग्री बिना आँफैमा रम्न सक्ने क्षमताहरुलाई कतै जानी न जानी धवस्त त पारीरहेका छैनौँ ? कतै म आँफै मेरो सन्तानहरुको सबै भन्दा ठुलो शत्रु त बनिरहेको छैन ?
आशा छ, यो लेखले अभिभावकहरुलाई आफ्ना सन्तानप्रति गर्नु पर्ने व्यवहारका बारेमा थोरै भए पनि जानकारी हाशिल हुनेछ ।
सन्जीवन प्रधान एक विचारक, सेल्स तथा लिडरशिप कोच हुन् । उनले विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा सम्लग्न भई नेपालका विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई व्यापार अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तालिम प्रदान गर्छन् ।
One thought on “अभिभावकले यति सामान्य कुरा याद नगर्दा बच्चाको जीवनभर अभिसाप बन्छ”
Sanjiwan April 24, 2020 at 3:41 pm · Edit